Enoba vlogger zokuhamba, blogger, okanye kwi-Twitter, akukho beats ujiko ephumelelayo binzana. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba abo banefuthe ekuhambeni bafunde ezona zakhono zinqabileyo, yokubhala.
Ngaphambi kokuba abe influencer, kufuneka uqeqeshe uhambo oluya kwindawo engaqhelekanga, kwaye uqale ukuthatha imifanekiso eyoyikisayo kwimeko entle, wena ufunda? Sebenzisa Gcina A Isitimela ukufumana amatikiti etreyini engambi, ngoko ke uya kuhlawula kakhulu ukuba umsebenzi ebomini bakho!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “5 Best Iziselo Local ukuba Zama eYurophu” kwi sayithi yakho? ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhow-to-become-a-high-flying-travel-influencer%2F%3Flang%3Dxh - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)